तपाइँको वेबसाइटको लागि HTTP / २ प्रयोग गर्दै: यसको मतलब के हो? - Semalt सेक्रेट्स सेक्रेट्स
तपाइँको वेबसाइटको लागि HTTP/२ प्रयोग गर्दै: यसको मतलब के हो? - Semalt सेक्रेट्स सेक्रेट्स
हालसालैका वर्षहरूमा इन्टरनेट हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै जोडिएको छ। हामी यसलाई यति सार्थक पाउँछौं कि हामी डाटाको सञ्चार गर्ने यसको अवस्थित विधिमा कर लगाइरहेका थियौं। कहिल्यै इन्टरनेट ईन्जिनियरि Tas टास्क फोर्स (IETF) को बारेमा सुनेको छ। हो, त्यहाँ एक कुरा छ। यो शरीर यसको पूर्ववर्तीको त्रुटिहरू ठीक गर्न नयाँ प्रोटोकलको साथ आयो। यो प्रोटोकल HTTPS/2 भनिन्छ।
धेरै जसो भागका लागि, HTTPS/२ प्रयोग गर्नु भनेको एक सरल र सीधा अगाडि प्रक्रिया हो। तपाईंको सर्वर प्रदायकमा निर्भर गर्दै, केहि प्रदायकहरूले पहिले नै उनीहरूको सर्भर CENTOS 6/7 प्रयोग गरेर लागू गरिसकेका छन्। यसको मतलब 99 99% सर्भर प्रयोग भएको छ।
यदि तपाईं साझा सर्भर होस्टिंग योजना चलाउनुहुन्छ, र तपाईं अशुभ हुनुहुन्छ र पुरानो संस्करण प्रयोग गर्ने केही सर्भर मध्ये एकमा अवस्थित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तुरून्त नयाँ सर्भरमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्नुपर्नेछ। सबै नयाँ VPS र प्रत्यक्ष सर्वर HTTP/2 सुविधा शामेल गर्दछ।
प्रोटोकल के हो?
चाहे HTTP/2 वा HTTP/1, शब्द प्रोटोकल सार्वभौमिक हो। प्रोटोकोललाई नियमहरूको राम्रो सेटको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन ग्राहकहरू (जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सूचना अनुरोध गर्नको लागि प्रयोग गर्ने वेब ब्राउजर हो) बीच डाटा संचार प्रवाहको नियन्त्रण गर्दछ र सर्भर (जुन अनुरोध गरिएको जानकारी समावेश गर्ने मेशिनहरू हुन्)।
प्रोटोकोलमा प्राय: तीन प्राथमिक भाग हुन्छन्: ती हेडर, पेलोड र फुटर हुन्। हेडर पेलोड अगाडि आउँदछ र जानकारी र स्रोत र गन्तव्य ठेगानाहरू र डाटा र प्रकार र पेलोड को सम्बन्ध मा डाटा समावेश गर्दछ।
पेलोड वास्तविक जानकारी हो जुन प्रोटोकल प्रयोग गरेर प्रसारित गर्न सकिन्छ।
फुटरले पेलोडलाई पछ्याउँदछ र नियन्त्रण क्षेत्रको रूपमा काम गर्दछ, जसले ग्राहक-सर्भर अनुरोधको लागि मार्ग नक्सा गर्दछ। यो हेडरको साथ उद्देश्य प्राप्तकर्ताहरूसँग जोडिएको छ प्योलोड डाटा त्रुटिहरूबाट मुक्त प्रसारित गरिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
हो, हामीलाई थाहा छ, यो गाह्रो देखिन्छ। यसलाई यस तरीकाले हेर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कसरी पोष्ट मेल सेवाहरू काम गर्दछन्। तपाईं पत्रहरू पठाउनुहुन्छ जुन लिफाफाहरूमा पेलोडहरू हुन्, जुन उनीहरूमा लेखिएको गन्तव्य ठेगानाको साथ हेडर हुन्, त्यसपछि तपाईं गोंद मोहर गर्नुहुन्छ र हुलाक टिकट थप्नुहुन्छ जुन फुटर हो। तपाईंको मेल सफलतापूर्वक डेलिभर गर्नका लागि, यी सबै कारकहरू ठाउँमा हुनु आवश्यक छ, जुन प्रोटोकल प्रक्रिया हो। जे होस्, जब हामी प्रोटोकल छलफल गर्छौं, हामी यी अक्षरहरूको प्रकृतिलाई डिजिटल रूपहरूमा परिवर्तन गर्दछौं। इन्टरनेटको साथ, डिजिटल जानकारी १ र ० सेकेन्ड प्रयोग गरी पठाइन्छ।
प्रारम्भमा, HTTPS प्रोटोकल आधारभूत आदेशहरू जस्तै बनाइएको थियो:
प्राप्त गर्नुहोस्: सर्भरबाट जानकारी पुनःबहाली गर्न।
पोष्ट गर्नुहोस्: यो ग्राहकलाई अनुरोध गरिएको जानकारी पुर्‍याउन प्रयोग गरियो।
यी सरल र अझै बोरिंग कमाण्डहरूको सेटले अन्य अधिक जटिल प्रोटोकलहरू पनि निर्माण गर्न आधारशिला गठन गर्‍यो।
HTTP/२ के हो, र यसलाई यत्तिको महत्त्वपूर्ण किन बनाउँदछ?
HTTP/२ हाइपरटेक्स्ट यातायात प्रोटोकल (HTTP) को लागि अपडेट हो। तपाईं यसलाई HTTPS को संस्करण २ कल गर्न सक्नुहुनेछ इन्टरनेट ईन्जिनियरि Tas टास्क फोर्स (IETF) द्वारा सिर्जना गरिएको। HTTPS, यसको आफ्नै प्रक्रिया, वा तपाइँको वेब ब्राउजर र तपाइँको वेब सर्भर बीचको सञ्चारको विधि हो। अब, HTTP/२ प्रोटोकोल प्रयोग गरी छिटो छिटो र तपाइँको वेबसाइट मा अधिक सुरक्षित पहुँच प्रदान गर्दछ।
हाल, त्यहाँ HTTP को एक डे फक्टो संस्करण छ, जुन HTTP/१.१ हो। HTTP/1.1 वेब पृष्ठहरूको सेवाका लागि मानक हो, तर जब टेक्नोलोजीको विकास भयो र समय बित्दै गयो, यसको प्रयोगसँगै समस्याहरू उत्पन्न हुन थाले। यो हुन सक्छ किनभने वेबसाइटहरू धेरै अधिक जटिल भयो र केही सुधारहरू गर्नुपर्ने थियो।
मुख्य मुद्दा यो थियो कि HTTP/१.१ ले वेबपेजहरू आकारमा बढेकोले बढ्दो विलम्बताको अनुभव गर्न थाले, र यी वेबपृष्ठहरूमा चित्रित गरिएका वस्तुहरू पनि संख्यामा वृद्धि भयो। जबकि यो स्पष्ट थियो कि वेब पृष्ठहरूको आकार कम गर्न धेरै चीजहरू गर्न सकिन्छ तर अधिक उत्पादक समाधान एचटीटीपी/२ विकास गर्नुपर्नेछ जुन भारी वेबपृष्ठका साथ आउने मुद्दाहरूलाई पुर्‍याउन एक कुशल ह्यान्डल हो, साथै अन्य सुधार गर्न ल्याप्सहरू जस्तै यातायात लेयर सुरक्षा (TLS) प्रयोग गरेर राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्न।
HTTP/२ को प्राथमिक लक्ष्य भनेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको तीन आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नु हो, र तिनीहरू सरलता, उच्च प्रदर्शन, र मजबुतता हुन्। नयाँ प्रोटोकोलले ब्राउजरको अनुरोधको प्रकृयामा विलम्बता कम गर्ने क्षमताहरू परिचय गरेर सबै तीन गोलहरू प्राप्त गर्न सक्षम छ। यसले सबै बहु उन्नत विधिहरू जस्तै मल्टिप्लेक्सि,, कम्प्रेसन, अनुरोध प्राथमिकता, र सर्भर पुश प्रयोग गरेर यी सबै गर्दछ।
अन्य संयन्त्रहरू पनि पेश गरिएको छ, जस्तै प्रवाह नियन्त्रण, अपग्रेड, र त्रुटि ह्यान्डलिंग पनि HTTP प्रोटोकलमा सुधारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले विकासकर्ताहरूलाई मद्दत गर्दछ किनकि यसले वेब-आधारित अनुप्रयोगहरूको लागि उनीहरूले उच्च-प्रदर्शन मानक र लचिलोपना सुनिश्चित गर्दछ।
यस सामूहिक प्रणालीले सर्भरहरूलाई ग्राहकहरूको अनुरोध भन्दा बढि सामग्रीको साथ प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। यस विधिले वेब प्रयोगकर्तालाई वेब ब्राउजरमा पूर्ण रूपमा लोड नभएसम्म सूचनाको अनुरोध गरेर हस्तक्षेप गर्नको लागि आवश्यक आवश्यकता हटाउँछ।
उदाहरण को लागी, HTTP/2 को साथ एक सर्वर को पुश क्षमता कल्पना गर्नुहोस्। यसले सर्वरलाई वेबसाइटको क्यासमा पहिले नै उपलब्ध जानकारी बाहेक पृष्ठको पूर्ण सामग्रीका साथ प्रतिक्रिया दिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
HTTP/२ डिजाइनको परिवर्तनको रूपमा आएको छ जहाँ वेब विकासकर्ताहरूले HTTP/1.1 का साथ अन्तर्क्रियात्मकता र अनुकूलता कायम गर्न सक्दछन्।
एचटीटीपी/२ को सुविधाहरू, लाभ र अपग्रेड के हुन्?
१. बहुविध स्ट्रिमहरू
HTTP/2 प्रोटोकल मार्फत पठाइएको पाठ ढाँचा फ्रेमहरूको द्वि दिशात्मक अनुक्रम सर्वर र ग्राहकको बीचमा आदानप्रदान हुन्छ, र हामी यसलाई "स्ट्रिम" भन्छौं। HTTP प्रोटोकोलको पहिलेको पुनरावृत्तिहरू एक पटकमा केवल एक धारालाई बोक्नको लागि पर्याप्त बलियो थियो, र स्ट्रिम प्रसारणको बीचमा अझै पनी समय ढिलाइ थियो।
जब तपाईं एक पछि अर्को आउने व्यक्तिगत स्ट्रिमहरू मार्फत धेरै मिडिया सामग्रीहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यस समय-ल्यापहरू शारीरिक रूपमा कष्टकर हुन्छन्। HTTP/२ परिवर्तनहरूको साथ आउँदछ जुन त्यस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ बाइनरी फ्रेमि layer लेयर स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।
यो नयाँ HTTP/2 लेयर ग्राहकहरु र सर्भरहरु लाई HTTP पेलोड बिस्तार गर्न सजिलो, सजीलो प्रबन्धन योग्य र स्वतन्त्र interleaved फ्रेम को फ्रेमहरुमा अनुमति दिन्छ। यो जानकारी त्यसपछि अर्को छेउमा पुन: एकत्रित हुन्छ, र यो पूर्ण रूपमा देखिन्छ।
बाइनरी फ्रेम ढाँचा लगातार स्ट्रीमहरू बीच कुनै विलम्ब नगरी बहु, एकैसाथ खुल्दै, र स्वतन्त्र द्विदिशात्मक अनुक्रमको एक सहज विनिमय सक्षम गर्दछ। यस दृष्टिकोणले HTTP/2 लाई लाभहरूको विस्तृत एर्रेमा खोल्दछ जस्तै:
समानान्तर मल्टिप्लेक्स अनुरोधहरू र प्रतिक्रियाहरू एक अर्काको मार्गमा प्राप्त गर्दैनन्।
एचटीटीपी/२ जडानले एकल टीसीपी जडान प्रयोग गर्दछ प्रभावी नेटवर्क स्रोत उपयोग सुनिश्चित गर्नको लागि बहुविध डाटा स्ट्रिमहरू प्रसारित भइरहेको तथ्यको बावजुद।
तपाईं अनावश्यक अप्टिमाइजेसन ह्याकहरू बिना नै गर्न सक्नुहुन्छ। अप्टिमाइजेसन द्वारा, ह्याक्सले छवि स्प्रिट्स, कन्टेन्टिनेसन, र डोमेन शार्डि ,लाई दर्साउँदै थिए।
विलम्बता कम भयो।
द्रुत वेब प्रदर्शन र अझ राम्रो एसईओ रैंकिंग।
तपाईंको नेटवर्क र आईटी संसाधनहरू चलाउनमा ओपिएक्स र क्यापेक्स कम भयो।
२. सर्वर पुश
HTTP/२ ले तपाइँको होस्ट सर्वरलाई अतिरिक्त जानकारी पठाउन अनुमति दिन्छ जुन क्यासको रूपमा भण्डार गरिएको छ यद्यपि ग्राहकले यस अनुरोध नगरे। यो सुविधाले वेब प्रयोगकर्ताहरूको भविष्यको अनुरोधको आशा गर्दछ र उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि थप क्यासिएबल जानकारी भण्डार गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि एक ग्राहक संसाधन A को लागी अनुरोध गर्दछ, र यो बुझिन्छ कि संसाधन बी अनुरोध गरिएको फाईलको साथ संदर्भित छ, सर्वर पुशले तपाईको सर्भर B लाई A को साथ साथै उचित ग्राहक अनुरोधको लागि पर्खनु पर्दछ। त्यसो भए, B लाई भविष्यको प्रयोगको लागि क्याचमा धकेलिएको छ, र यस संयन्त्रले अनुरोध कम छोटो काटेर समयको बचत गर्दछ, राउन्ड ट्रिपको प्रतिक्रिया दिन्छ, नेटवर्क विलम्बता कम गर्दछ।
सर्भरले HTTP/2 को पुश पक्षले निम्न लाभहरू पनि ल्याउँछ:
ग्राहकले क्यासमा पुश स्रोतहरू बचत गर्न सक्छ।
क्यासहरू पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सर्भरले टीसीपी जडान भित्र मूल अनुरोध गरिएको जानकारीको साथ मल्टिप्लेक्स पुश स्रोतहरू गर्न सक्दछ।
सर्भरले धक्का दिएका संसाधनहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।
वेब प्रयोगकर्ताहरू धक्का क्याच संसाधन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लाइन्टहरूले धक्का स्ट्रिमहरूको संख्या सीमित गर्न सक्छन् जुन एकसाथ आउँदछ।
B. बाइनरी प्रोटोकल
क्षमताहरू र विशेषताहरूको सर्तहरूमा जस्तै कुनै पाठ प्रोटोकललाई बाइनरी प्रोटोकलमा रूपान्तरण गर्न, HTTP/२ उत्तम छ। बाइनरी आदेशहरू प्रयोग गरेर, HTTP/२ ले अनुरोध-प्रतिक्रिया सर्कलहरू छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्न सक्दछ। बाइनरी रूपमा यी कमाण्डहरू पठाएर, HTTP/2 फ्रेमिंग र प्रयोगकर्ता आदेशहरूको कार्यान्वयन सरलीकरणको साथ जटिलताहरू कम गर्दछ, जुन पहिले जटिल थियो किनभने ती दुवै पाठ र वैकल्पिक खाली ठाउँहरू थिए। बाइनरी प्रोटोकलले HTTP/२ लाई निम्न लाभहरू प्रदान गर्दछ:
कम ओभरहेड फ्रेकिंग डेटा।
त्रुटिहरू सामना गर्ने कम सम्भावनाहरू।
प्रभावकारी नेटवर्क स्रोत उपयोग।
सुरक्षा मुद्दाहरू जुन HTTP/१ को शाब्दिक प्रकृतिको कारण उत्पन्न हुन्छन्।
नेटवर्क विलम्बता कम भयो।
यीसँग, हामी केवल वेबसाईटहरूको HTTP/२ को उपयोग गरेर फाइदा लिनको लागि सतह स्क्र्याच गर्न थाल्छौं। Semalt तपाइँको वेबसाइट HTTP/2 मा चलेको सुनिश्चित गर्न र तपाइँ HTTP/2 को उपयोग गरेर अधिक सुविधाहरूको मजा लिन सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो समाचार यो हो कि HTTP/२ मा अपग्रेड गर्न गाह्रो प्रक्रिया छैन, र तपाइँले यो गर्न सक्नुहुनेछ केवल तपाइँको सर्भर होस्टलाई अपग्रेड गरिएको सर्भरमा सार्नको लागि।